Myanmar ICT Solutions Limited Website Development, Software Development, Mobile App Development, e-Commerce Solutions, Server and Networking Service, CCTV and Access Control, Web Hosting, Domain Registration Service in Myanmar | Myanmar ICT Solutions Limited ပင်မစာမျက်နှာ - Myanmar ICT Solutions Limited
e-Commerce ဝဘ်ဆိုက် ရေးဆွဲခြင်း
Hot Line: ၀၉ ၇၆ ၅၁၀၁၆၆၀
Myanmar ICT Solutions Limited
ဝဘ်ဆိုက် ရေးဆွဲခြင်း , ဆော့ဝဲ ရေးဆွဲခြင်း & IT ဝန်ဆောင်မှုများ
One Stop ICT Services Provider
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးပိုမိုအားကောင်းရန်၊ ပိုမိုဒီဂျစ်တယ်အသွင်ဆောင်ရန်၊ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်၊ ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိစေရန်နှင့် အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပါရစေ။ Myanmar ICT Solutions Limited သည် လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် မြန်မာ့ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဒီဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲသော ၉ နှစ်အတွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖန်တီးခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးသားခြင်း၊ CCTV နှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်များ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆာဗာနှင့်ကွန်ယက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို စီပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို အောင်မြင်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ၃၀ ကျော်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒီဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် အစဉ်ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ Myanmar ICT Solutions Limited ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ခရီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင် ပိုမိုဆန်းသစ်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာ များကို ဖန်တီးကာ လူကြီးမင်းတို့နှင့်အတူ ဝေမျှလိုပါသည်။
ဝယ်ယူသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
Online ပေါ်ကမိတ်ဆွေ၏အမှတ်အသားကို မိနစ်ပိုင်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ...
ယနေ့ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးခေတ်တွင် လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေးသည် ဒီဂျစ်တယ်ခြေရာမရှိသေးပါက လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်များကြားတွင် ထင်ပေါ်ပြီး စားသုံးသူများကြားတွင် ကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်ကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဖန်တီးမှုဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ MISL သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ယုံကြည်အားထားရသော ဝက်ဘက်ဆိုဒ် ဖန်တီးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
MISL ၏ ထူးချွန်သော ပညာရှင်များသည် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင် ဖန်တီးခြင်း မှစ၍ စက်ဝန်းအပြည့် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆော့ဖ်ဝဲဖန်တီးခြင်း ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးကို ပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆော့ဖဲဝဲဖန်တီးခြင်း နည်းပညာမျာသည် ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာဖြင့် လူကြီးမင်းတို့စီးပွားရေး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ယုံကြည်အားထားနိုင်ပါသည်။
အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးအတွက် နည်းပညာများ
အီလက်ထရောနစ် စီးပွားရေးသည် သင့်စိးပွားရေးကို ကြော်ငြာခြင်း၊ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပေးပို့ချိန်တွင် ငွေပေးချေခြင်းမှ ဝက်ဘ် ဈေးဆိုင်တည်ဆောက်ခြင်းအထိ အကန့်အသတ်မရှိသောဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းပါသည်။ အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး လူကြီးမင်းတို့၏ လက်ထဲတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
CCTV နှင့် Access Control
MISL သည် နေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် CCTV နှင့် တပ်ဆင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်ရှိသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ သည် ၂၄ နာရီအတွင်း လျှင်မြန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျက်ရှိပါသည်။
MISL သည် လူကြီးမင်းတို့၏ ကွန်ယက်ရှိ ဆာဗာများအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စောင့်ကြည်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲသူများသည် လျှင်မြန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့် နည်းပညာများကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
IoT (Internet of Things) ဖန်တီခြင်း
IoT ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကို များစွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ IoT နည်းပညာနှင့်အတူ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အယူအဆများနှင့် ရည်မှန်းချက်များသည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ICT လိုအပ်ချက်များ နှင့် အခြားသောလိုအပ်ချက်များကို လေ့လာပြီးနောက် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် proposal တင်သွင်းပါသည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းထားသော proposal နှင့် quotation များကိုရွေးချယ်ပြီးသောအခါ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။
တတိယအဆင့်အနေဖြင့် သင့်၏စီးပွားရေးအတွက် လိုအပ်သော ICT နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရေးဆွဲပေးခြင်း ၊ တည်ဆောက်ပေးခြင်း နှင့် တပ်ဆင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပေးပါသည်။
သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် ပက်သတ်သော project တစ်ခု ပြီးဆုံးပါက ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင့်၏ project နှင့်ပက်သတ်သော အချက်အလက်များကို လွဲပြောင်းပေးခြင်း ၊ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန် training များ ပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Unbelievably helpful to us when we wanted to create our email accounts and develop our company web page. It has been our delight to work with MISL to develop our website and their services have gone above and beyond our expectations. Furthermore, MISL's team has provided us the quick and responsive support we require to keep our website current and operational.
Lai Yi Mon Myint @ Bora MD : Talent Experts HR Solution Services
MISL has been working with us for the last5years and they have been doingagreat job to date. They always make sure that our demands are met to our satisfaction. The team is also friendly and extremely easy to communicate. I always recommand MISL for many my business clients.
Mr. Prabhath Wickramasinghe, Operation Manager @ Hotel-63
It’s long been several years that we cannot use our website for various circumstances. Now we are extremely grateful for having an updated website through the support of the Myanmar ICT Solutions Limited (MISL) sponsored by Essential Health, Jhpiego which isagreat service, friendly, helpful, and honest.
I strongly believe that your generosity enables us to expand our programs in 2021 and onwards, generating more impact in local healthcare communities at all levels to move nurses closer to achieve their strategic directions as well as sustainable development goals through learning resource package and online courses. I look forward to learning more and brighter days ahead.
Professor Daw Yin Mya, President @ Myanmar Nurse And Midwife Association
MISLhas been working with us two years but we think our relationship was has been5or above years. Because of the team of MISL make our demands and webpages problem solving immediately. Chief of MISL was so friendly and think about other clients demands. So I recommend MISL for many many business clients and others medical organizations like us. Thanks
Kyi Tha, Activity Manager @ MAFP
အမှတ် (၄၂)၊ မြေညီထပ်၊ ဇဋိလ လမ်း ၊တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။